नेपालगन्जमा पोखराका पर्यटन व्यवसायीलाई स्वागत छ ! - Arthapage
नेपालगन्जमा पोखराका पर्यटन व्यवसायीलाई स्वागत छ !
प्रकाशित मितिः ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:१९ February 20, 2021
नेपालगन्ज : नेपालगन्जमा पोखराका पर्यटन व्यवसायीलाई स्वागत गरिएको छ । प्लेनबाट आएको टोलीलाई नेपालगन्जमा स्वागत गरिएको हो । नेपालगन्जबाट गएको टोलीलाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीसहित पर्यटन व्यवसायीले शुक्रबार स्वागत गरेका थिए ।
मेयर राणाको नेतृत्वमा नेपालगञ्जदेखि त्यहाँका पर्यटन व्यवसायी पोखरा घुम्न गएका थिए ।
मेयर धवल शम्शेरलाई पोखराका मेयर मानबहादुरले माला लगाए र अंकमाल गर्दै भने, ‘पोखरामा स्वागत छ ।’ नेपालगन्ज र पोखराबीच पर्यटन सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा पोखराका मेयरले के भने ? हेर्नुहोस्
शुक्रबारै पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीको नेतृत्वमा पोखराका व्यवसायी त्यही चार्टर विमानमा नेपालगञ्ज घुम्न पुगेका छन् । नेपालगञ्जबाट चार्टर विमानले आइतबार पोखराको टोलीलाई लिएर ओर्लने छ र पोखराबाट नेपालगञ्जको टोली लिएर फर्किएको हो ।
प्रकाशित मितिः ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:१९ |
Prevनेपालगन्ज–पोखरा पर्यटन ‘कनेक्सन’ले उत्साह
Nextनेपालगन्ज फोटो फेस्टिवलका विधामा दैनिक जीवनदेखि बन्यजन्तु तथा प्रकृतिसम्म